MD Farmaajo oo soo farageliyay muran ka taagan magacaabista Guddoomiyeyaal degmo & Yariisow oo ku jahwareeray | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA MD Farmaajo oo soo farageliyay muran ka taagan magacaabista Guddoomiyeyaal degmo &...
MD Farmaajo oo soo farageliyay muran ka taagan magacaabista Guddoomiyeyaal degmo & Yariisow oo ku jahwareeray
Ismaaciil Mukhtaar (Orange) oo dhowaan loo magacaabay Guddoomiyaha degmada Cabdi-casiis ee Gobolka Banaadir ayaa hadda la sheegay in loo wareejiyay degmada Xamar Jajab oo dhowaan guddoomiyihii degmadaasi loo magacaabay degmada Yaaqshiid.
Odayaal iyo Waxgarad ku heyb ah Guddoomiyaha xilka laga qaaday ee degmada C/casiis Sharmaarke Maxamed Ladane ayaa dacwad gaarsiiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya,waxayna ka horyimaadeen xilka ka qaadista guddoomiyaha.
Degmada Xamar jajab ayaa aheyd gudoomiye la’aan maadaama gudoomiyihii degmadaas maalmo ka hor xilka laga qaaday, loona magacaabay gudoomiyaha degmada Yaaqshiid.
Guddoomiyaha magacaaban ee degmada Xamar Jajab ee Gobolka Banaadir Ismaaciil Mukhtaar (Orange) ayaa maalinta tallaadada ee soo socoto si rasmi ah ula wareegaya xilka guddoomiyaha.
Waa markii labaad ee gudoomiye Yariisow uu ku fashilmo gudoomiye uu magacaabay, dhowaan ayeyna aheyd markii uu ka laabtay wareegto uu gudoomiye cusub ugu magacaabay degmada H/wadaag, markii waxgarad ku heyb gudoomiyaha xilka laga qaaday ay dacwad gaarsiiyeen raisul wasaaraha Somalia, taasoo keentay in loo daayo shaqadiisa.